Walt Disney Archives - MoviesFan
တရားဝင်ရပ်နားလိုက်တဲ့ The Punisher နဲ့ Jessica Jones
Frank Castle တစ်ယောက် သူ့ပြဿနာတွေကို ရှင်းလို့မပြီးသေးပေမယ့် Netflix ကတော့ The Punisher ဇာတ်လမ်းတွဲကို season2အပြီးမှာ အဆုံးသတ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Marvel ဇာတ်လမ်းတွဲနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Jessica Jones ကိုလည်း season3ပြီးရင် cancel လုပ်တော့မှာမို့ Netflix ပေါ်က MCU ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအကုန်ဆုံးခန်းတိုင်ပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Marvel ရဲ့ Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, The Defenders, Daredevil စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဟာ Netflix ရဲ့ Read More
Marvel, Netflix, Walt Disney
Anna နဲ့ Elsa တို့ကို တဖန်ပြန်မြင်ရတော့မယ့် Frozen 2
၂၀၁၉ ကတော့ Disney ရဲ့ နှစ်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ Toy Story 4, Dumbo live-action, Aladdin, Lion King, Star Wars နဲ့ Marvel ရုပ်ရှင်တွေပိတ်ကားပေါ်ရောက်ရှိလာဖို့ အစီအစဉ်ရှိနေတဲ့အပြင်ကိုမှ အခု Frozen2ပါထပ်မံထွက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ Frozen ဇာတ်ကားရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့် ဒီ Frozen2ဇာတ်ကားရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ Read More
Animation, Upcoming Film, Walt Disney
GOTG: Vol.3က သူရိုက်ရမယ့် ဇာတ်ကားမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ Taika Waititi
တကယ်တော့ Guardians of The Galaxy: Vol.3ဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာ ပြဿနာတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ နှစ်လယ်လောက်ကတည်းက စတင်ခဲ့တာပါ။
ဖြစ်ပုံက တခြားကြောင့်တော့ မဟုတ်ရပါဘူး။ GOTG: Vol. 1 နဲ့2တို့ကို အကောင်းဆုံး ပုံဖော်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ James Gunn ဟာ GOTG3ကိုတော့ ဆက်လက်ရိုက်ခွင့် မရှိတော့ဘဲ ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လထဲမှာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတာမို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အလုပ်ဖြုတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ GOTG ဇာတ်ကားတွေကို Read More
Action & Adventure, celebrity news, Hollywood, Marvel, Science Fiction, Superhero, Walt Disney
Toy Story-4မှာ အသွင်သစ်နဲ့ ပြန်လာခဲ့တဲ့ သိုးကျောင်းသမလေး Bo Peep
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရုပ်ကလေးတွေ အများကြီးပါ၀င်တဲ့ Toy Story ဇာတ်ကားလေးတွေထဲက နုနုနယ်နယ်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ သိုးကျောင်းသမလေး Bo Peep ကို Animation ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေအနေနဲ့ မှတ်မိကြဦးမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ပြီးတော့ Bo ဟာ ၁၉၉၅ နဲ့ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွေမှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Toy Story 1 နဲ့2တို့မှာ Read More
Animation, celebrity news, Hollywood, upcoming, Walt Disney